Bijay Balal – Bijay Balal
Author: Bijay Balal
Home › Posted by Bijay Balal
म आज छोरी ,भोलि बुहारी किन ?
June 30, 2020 No Comments Bijay Balal
म आज छोरी ,भोलि बुहारी किन ? आमा बावु : छोरी तिमि भोलि अर्कैको घर जानुपर्छ। तिम्रो पनि सासु ससुरा हुन्छन । यो भन्दा भिन्न अर्को घर पनि हुन्छ। तिम्रो दिदीको जस्तै। छोरी : आमा , म आज छोरी ,भोलि बुहारी किन ? ………..अव चुपचाप ……….. बर्षौदेखि यस्तै कुराहरु सिकाईन्छ। यस्तो किन सिकाईदैन होला ?Read More…
June 12, 2020 No Comments Bijay Balal
“सोच “सफलताको विऊ।
June 7, 2020 No Comments Bijay Balal
यदि तपाइले आफुले हारेको सोच्नुभयो भने हारेकै हुनुहुनेछ।आफुमा साहस नभएको सोच्नुभयो भने तपाइले आफुमा साहस पाउनुहुन्न। यदी तपाइँ जित्न चाहानुहुन्छ भने जित निश्चित छ। तपाइले जित्ने लगभग तय छ। यदि यस चिजमा अवश्य हार्छु होला भन्ने सोच्नुभएको छ भने तपाई हरीसकेको हुनुहुनेछ।किनकी संसारमा हामीले पाएका छौ : सफलता कुनै व्यक्तिको इच्क्षा बाट सुरु हुन्छ। योRead More…
बिडम्वना मनको -By Dhan Bdr Funjali
May 15, 2020 No Comments Bijay Balal
भन्नलाई मनको कुरा म संग आट थिएन किनकि तिमीसंग माया गर्ने मन र म संग धनको गाठ थिएन । जाऊ भो एकल यात्री मायालाई रमाउन दे सुन्केसरी मायालाई सुनकै संसारमा भन्यो मेरो मनले किनकि मरुभूमि झी तिम्रो त्यो मनमा गुलाब झैँ मेरो माया पलाऊने कुनै छाटकाट थिएन -Written by DBT.FM
एक पृथक भाव -By Dhan Bdr Funjali
May 10, 2020 No Comments Bijay Balal
खुसीमा त् जो पनि हास्न सक्छ सक्छौ भने दुखमा पनि हासेर हेर । मनमा पलाएको सपनाको महल अर्कैको स्वार्थमा मासेर हेर । के हो एकलौटे जीवन थाहा पाउने छौ मनमा राखी कसैलाई तिमि उसैको यादमा तिमि बाचेर हेर । -Written by Dhan Bdr Funjali Its Your Turn .
how to get premium image for free-in 2020
April 30, 2020 No Comments Bijay Balal
तपाई हामि सबै जुन जिन्दगि बाचिरहेका छौ हुनसक्छ त्यो त्यति अर्थ लाग्दो छैन । आज यस लेखबाट हामि यहि कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्ने छौ कि हामि हाम्रो जीवनलाई कसरी अझै अर्थपूर्ण अर्थात Meaningful बनाउन सकिन्छ भनेर । यसका लागि ११ कदम उल्लेख गरीएको छ जसले साच्चिकै तपाई हाम्रो जीवनलाई Next Level मा लैजान मद्दात गर्नेRead More…
How to set the default Search Engine in Chrome in 2020 100% working method
April 17, 2020 No Comments Bijay Balal
How to set default Search Engine in Chrome in 2020 100% working method Click here:
How to purchase Online Antivirus Through Esewa(Online कसरी सस्तो मुल्यमा Antivirus किन्न सकिन्छ ?)
April 9, 20206Comments Bijay Balal
March 29, 2020 No Comments Bijay Balal
कोरोनाले राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्म, करोडपतिदेखि सुकुम्बासीसम्मलाई विनाभेदभाव ‘नजरबन्द’मा राखेको छ, तर पशुपति आर्यघाटमा भने अन्त्येष्टिमा पनि धनी र गरिब छुट्याइन्छ, अझ सरकारले तोकेको रेट तिर्न नसक्ने गरिबलाई दाहसंस्कार गर्ने छुट पनि छैन सहरमा सन्नाटा छ, राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारण, करोडपतिदेखि सुकुम्बासी कोरोनाको ‘नजरबन्द’मा छन् । मान्छेले घुम्न छाडे, काम गर्न छाडे, कतिपयले भोकै पनि छाक टारे । तर, टार्नै नसकिनेRead More…